KIA nih SAC ralkap an bawh hna i an kah hna,athi mi an tam. An i kah lioasi ca ahathi zat hngalh khawhasi rih lo – Buanchukcho
KIA nih SAC ralkap an bawh hna i an kah hna,athi mi an tam. An i kah lioasi ca ahathi zat hngalh khawhasi rih lo
KIA nih SAC ralkap an bawh hna i an kah hna,athi mi an tam. An i kah lioasi ca ahathi zat hngalh khawhasi rih lo.
ဒေါ့ဖုန်းယန်တွင် စစ်ကောင်စီ တပ်တွေကို KIA က စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်သဖြင့် စစ်ကောင်စီတပ်သား အများအပြားသေဆုံး ဧရာဝတီတိုင်းမ် ဇွန် ၁၈ ရက် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြိုနယ်၊ ဒေါ့ဖုန်ယန်ကို ချီတက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား ၈၀၀ ခန့်ကို ဇွန်လ ၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းအချိန်က KIA မှ
စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်သဖြင့် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီး တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြား သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“စစ်ကောင်စီဘက်က စစ်ကားအစီး ၄၀ ကျော်နဲ့ အင်းအား ၈၀၀ ခန့်လောက် သူတို့ချီတက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရ KIA က စောင့်ပြီးတိုက်တာ။ အခုချိန်ထိတော့ တိုက်နေတုန်းပဲ။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က သေတာ များနေတယ်”ဟု ဒေါ့ဖုန်းယန်ဒေသခံတစ်ဦးက ဧရာဝတီတိုင်းမ်ကို ပြောသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်မှ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ နွမ်လန်းနှင့် ဒေါ့ဖုန်းယန်ဘက်သို့ စစ်အင်အားများ အဆက်မပြတ် တိုးချဲ့နေပြီး KIA တပ်များနှင့် ဒေါ့ဖုန်ယန်တွင် ထိပ်တိုက်တွေဆုံကာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်အထိအခိုက် အကျအဆုံးအခြေအနေများ မသိရသေးပါ။ ဒေသခံများကတော့ KIA က စစ်ကောင်စီတပ်ကို စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးသူ အမ​ျားအပြားရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။ (သတင်းဓာတ်ပုံက ပုံဟောင်းဖြစ်ပါသည်။) #AyeyarwaddyTimes #KIA #ဒေါ့ဖုန်းယန်. The Hakha Times
thawngpang dang relchap : Mizoram Cozah Chinmi Phun An Dawtnak Hi A Sang Hringhran An Thil Tuahmi Ai Dawh Tuk